In kabadan 30 maalin oo dalka laheyn wax Ra’iisul Wasaare ah | Keydmedia
In kabadan 30 maalin oo dalka laheyn wax Ra’iisul Wasaare ah
July 25, 2020 ayaa xilka laga qaadey Xasan Cali Khayre kadib markii Mooshin lama filaan ah laga geeyay Gollaha Shacabka, kaasoo 170 Xildhibaan u codeeyay in kalsoonida lagala noqdo Xukuumadda xili uu jiray Khilaaf u dhaxeeya Xafiisyada ugu sareeya dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo markii la riday Khayre 31 maalmood kahor wuxuu shacabka u balan-qaadey inuu bil gudaheeda kusoo magacaabayo Ra'iisul Wasaare cusub, oo Khayre bedelaya, taasoo ku biirtay balan-qaadyadii uu fulin waayay Madaxweynaha.
Xukuumad aan haysan Kalsoonida Baarlamaanka, ayaa si sharci darro ah dalka uga shaqeynaysa, waxayna fulinaysaa go'aanno aan dastuurka u ogolaanaynin iyo saxiixa heshiisyo Wasiiradda xilka ka degaya dhaqaale ku raadinayaan.
Madaxweynaha ayaa la balansan habeen dambe, August 28 Xildhibaanada HAWIYE, oo kala hadli doono qofka uu u magacaabayo Ra'iisul Wasaaraha, taasoo horseedaysa in uu sii dheeraado waqtiga uu dalka sii ahaanayo Xukuumad iyo Ra'iisul Wasaare la'aan.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jebiyay dastuur soo jireen ah oo ay ku dhaqmi jireen madaxdii isaga ka horeysay ee iskaga daba maray xilka Madaxweynaha tan iyo sanadkii 1960-kii. [Halkan ka akhri Warka]
Markii uu riday Khayre, Farmaajo ayaa ku sheegay qoraal xafiiskiisa kasoo baxay inuu haysto bil kaliya oo ku magacaabayo Ra'iisul Wasaare, maantana uu iska indhatirayo ballankiisii. Waxaa suuragal ah inuu rumeysan yahay rabitaankiisa inuu ka weyn yahay Dastuurka.
Labo Bilood ayaa ka dhiman doorashadda Baarlamaanka, mana muuqato diyaar-garow la sameeyay iyo xal laga gaarey khilaafka ka jira nooca doorashadda, iyadoo dib u dhac iyo mudo korarsi noqonayso lama huraan, waxaana laga cabsi qabaa in dalka gallo fowdo iyo marnaasho dhinac awoodda [Power Vacuum].